Taliska Booliska Soomaaliyeed oo faah faahin ka bixiyay Qarax lagu fashiliyay Muqdisho & argagixiso la toogtay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Taliska Booliska Soomaaliyeed oo faah faahin ka bixiyay Qarax lagu fashiliyay Muqdisho...
SNTV:- Taliye ku-xigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sareeye Guuto Sakiya Xuseen Axmed ayaa faah faahin ka bixisay Qarax ay ciidamada amniga ku fashiliyeen magaalada Muqdisho iyo labo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu dilay bar koontarool oo ay ciidanka ku leeyihiin Seybiyaano ee degmada Hodan.
Sareeye Guuto Sakiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay in Hay’adaha amniga oo horay ula socday xogta Qaraxa ay fashiliyeen gaari Qarax oo la rabay in lagu waxyeeleeyo shacabka,wuxuuna dhagar qabanaha isku dayay inuu gaariga xoog ku soo jiirsiiyo goob u xiran ciidamada ammaanka.
Dhanka kale waxeey Ciidamada amniga dileen labo ka tirsan argagixisada Al Shabaab oo isku dayay in ay xoog ku soo maraan bar kontrool oo ay ciidanka ku leeyihiin Seybiyaano ee degmada Hodan.
Previous articleCiidanka Amniga Oo Maanta ka hortagay islamarkaana Fashiliyay Baabuur Walxaha Qarxa laga soo buuxiyay.
Next articleDEG DEG: Ciidamada amniga oo Muqdisho ku dilay labo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab